စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းစနစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဩဂတ်စတို ပီနိုချက် (Augusto Pinochet) ဦးဆောင်သော ချီလီနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ (မတ် ၁၉၈၆)
စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းစနစ် (အင်္ဂလိပ်: Military Junta) ဆိုသည်မှာ အစိုးရကိုစစ်တပ်မှအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်‌သော စစ်အစိုးရစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ "Junta" (ဟွန်တာ သို့မဟုတ် ဂျွန်တာ) ဟူသောဝေါဟာရသည် 'ကော်မတီ'၊ 'အဖွဲ့အစည်း' ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ပန်နင်ဆူးလားစစ်ပွဲ (Peninsular war) ကာလ၌ စပိန်လူမျိုးများမှ ပြင်သစ်နယ်ချဲ့များကိုတော်လှန်ရန်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာမှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ "ဟွန်တာ" အခေါ်အဝေါ်ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရည်ညွှန်းရာတွင် သုံးနှုန်းခေါ်ဆိုကြသည်။
ထိုစစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းစနစ်ကို အဓိကအားဖြင့် Open rule နှင့် Disguised rule ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ Open rule သည် စစ်တပ်မှကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့ဖြင့် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Disguised rule တွင် Civilianization နှင့် Indirect rule ဟူ၍ ထက်မံခွဲခြားနိုင်သည်။  Civilianization သည် အရပ်သားအစိုးရကို ဖွဲ့စည်းပေးသော်လည်း ထိုအစိုးရအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီကို ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးမှဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ Indirect rule တွင်မူ အရပ်သားအစိုးရကို အယောင်ပြအဖြစ်သာထား၍ ပကတိအာဏာကိုစစ်တပ်ကသာ ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားသည်။
၁၉၂၀ ဝန်းကျင်မှစ၍ လက်တင်အမေရိကဒေသများတွင် ထိုစစ်အဖွဲ့အစည်းစနစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထိုစစ်တပ်အဖွဲ့များတွင် ကြည်းတပ်၊ ရေတပ်၊ လေတပ် စသည်တို့မှ အရာရှိများပါဝင်ကြသည်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် ဆင်မြူရယ် ဖိုင်နာ (Samuel Finer) ၏လေ့လာချက်အရ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများ၏ စစ်တပ်အဖွဲ့များတွင် ပျမ်းမျှ ၁၁ ယောက်အစား သုံးလေးယောက်မျှသာ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
အာဂျင်တီးနား – အမျိုးသားပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် (National Reorganization Process) (၁၉၇၆–၁၉၈၃)
ဘိုလီးဗီးယား – Bolivian military juntas (၁၉၇၀-၁၉၇၁ နှင့် ၁၉၈၀-၁၉၈၂)
ဘရာဇီး – ၁၉၃၀ နှင့် ၁၉၆၉ မှ စစ်အစိုးရများ
ချီလီ – Government Junta (၁၉၇၃-၁၉၉၀)
တရုတ် – Temporary Provisions against the Communist Rebellion (၁၉၄၈–၁၉၉၁) တရုတ်ပြည်မကြီးသည် ကွန်မြူနစ်လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခြင်းကြောင့်ပြုလုပ်ရခြင်း
အီဂျစ် – တပ်မတော်ကောင်စီကြီး (Supreme Council of the Armed Forces) (၂၀၁၁-၂၀၁၂)
အယ်ဆာဗေဒို – တော်လှန်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ (Revolutionary Government Junta) (၁၉၇၉–၁၉၈၂)
အီသီယိုးပီးယား – အီသီယိုးပီးယားဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ၏ ပြင်ဆင်မှုတပ်မတော်အစိုးရ (Provisional Military Government of Socialist Ethiopia၊ "Derg" ဟု လူသိများ) (၁၉၇၄–၁၉၈၇)
ဖီဂျီ – Frank Bainimarama ၏ စစ်အစိုးရ (၂၀၀၆–၂၀၁၄)
ဂရိ – တော်လှန်ရေး‌ကော်မတီ‌‌ (Revolutionary Committee) (၁၉၆၇–၁၉၇၄)
ဂျော်ဂျီယာ – စစ်တပ်ကောင်စီ (Military Council of the Republic of Georgia) (၁၉၉၂ ဇန်နဝါရီ ၆ မှ မတ်လ ၁၀)
ဂီနီ – ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးသားကောင်စီ (National Council for Democracy and Development) (၂၀၀၈-၂၀၁၀)
ဟေတီ – ၁၉၉၁ ၌ အာဏာသိမ်း၍ ၁၉၉၄ တွင် ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည်။
လိုက်ဘေးရီးယား- ပြည်သူကယ်တင်ရေးကောင်စီ (People's Redemption Council) (၁၉၈၀-၁၉၈၄)
မာလီ – ပြည်သူကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အမျိုးသားကော်မတီ (National Committee for the Salvation of the People) (၂၀၂၀-လက်ရှိ)
မြန်မာ – နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (၁၉၈၈–၂၀၁၁)၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (၂၀၂၁-လက်ရှိ)
နီကာရာဂွါ – နိုင်ငံတော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (Junta of National Reconstruction) (၁၉၇၉-၁၉၈၅)
နိုင်‌ဂျီးရီးယား – Nigerian Military juntas (၁၉၆၆–၁၉၇၉ နှင့် ၁၉၈၃–၁၉၉၈)
ပီရူး – Peruvian Military Junta (၁၉၆၈–၁၉၈၀)
ပိုလန် – အမျိုးသားကယ်ဆယ်ရေးတပ်မတော်ကောင်စီ (Military Council of National Salvation) (၁၉၈၁-၁၉၈၃)
ပေါ်တူဂီ – အမျိုးသားကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (National Salvation Junta) (၁၉၇၄-၁၉၇၅)
တောင်ကိုရီးယား – နိုင်ငံတော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကောင်စီကြီး (Supreme Council for National Reconstruction) (၁၉၆၁-၁၉၆၃)
ဆူဒန် – Transitional Military Council (၂၀၁၉)
ထိုင်းနိုင်ငံ – အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ (Council for National Security) (၂၀၀၆-၂၀၀၈) နှင့် အေးချမ်းရေးနှင့်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အမျိုးသားကောင်စီ (National Council for Peace and Order) (၂၀၁၄-၂၀၁၉)
ယူဂန်းဒါး – အမျိုးသားခုခံရေးလှုပ်ရှားမှုပါတီ (National Resistance Movement) (၂၀၂၀)
↑ Junta, Encyclopædia Britannica (last updated 1998).
↑ "Institutions of the Offensive: Domestic Sources of Dispute Initiation in Authoritarian Regimes, 1950-1992" (2006). American Journal of Political Science 50 (1): 113–126. doi:10.1111/j.1540-5907.2006.00173.x.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Brooker, Non-Democratic Regimes (2d ed.), p. 153.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Paul Brooker, Comparative Politics (ed. Daniele Caramani: Oxford University Press, 2014), pp. 101-102.
↑ Fiji holds historic election after years of military rule - DW - 17.09.2014။ Deutsche Welle။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းစနစ်&oldid=716383" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။